iPhone jailbreak nsogbu: ka i kwesịrị ime ya ma ọ bụ? t m
iPhone jailbreak nsogbu: ka i kwesịrị ime ya ma ọ bụ?
Jailbreak gị iPhone bụ nnọọ nkịtị ụbọchị ndị a dị ka ọ na-enye otu nke ukwuu karịa ụlọ maka ukwuu ohere. N'otu oge ahụ dị, jailbreak gị iPhone nwere ike nwere ike iduga a ọtụtụ nsogbu dị ka mma. Ebe a bụ ndepụta nke ihe ndị mere na kasị mma kọwaa ihe mere jailbreak gị iPhone nwere ike ma ọ ga-abụ na ezi otu echiche.
Uru nke jailbreaking gị iPhone
• Access ka netwọk ndị ọzọ - One nke bụ isi na-akpata nchegbu na iPhone bụ na ngwaọrụ na-abịa na naanị otu na-eweta ọrụ na ụfọdụ ahịa, ihe atụ na USA, AT & T nwere niile ikike n'elu iPhone ruo ogologo oge. Jailbreaking gị iPhone dị otú ahụ ikpe nwere ike ka ị na-eji ngwaọrụ ndị ọzọ na mma netwọk dị ka nke ọma; na-enye gị nke dị mkpa nnwere onwe nke ịbụ enwe ike ikpebi onye anyị kwesịrị eweta ọrụ gị.
• Ọtụtụ ndị ọzọ ngwa ọdịnala n'ihi jailbroken iPhone - App Store ezie eruwo a ogologo ụzọ na ọtụtụ ọhụrụ ngwa a na-kwukwara kwa ọnwa, Otú ọ dị na a jailbroken ngwaọrụ, ị ejedebe ịnweta a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọhụrụ na ihe ngwa. Ka ihe atụ, na gị jailbroken iPhone, ị nwere ike ịnweta ma jiri Cydia, na ehiwe nke a na-akpọ 'iwu na-akwadoghị ngwa' ị na-adịghị esi na App Store ma ọ bụghị.
• Ọ bụ nnọọ mfe ime - jailbreaking gị iPhone bụ ezigbo mfe na ihe na-nwere ike mere mara mma ngwa ngwa; ị na-adịghị mkpa ọ bụla software na-ebudatara ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ị nwere ike mezue dum usoro na ole na ole clicks iji ihe nchọgharị weebụ n'elu a ọma WiFi njikọ a nkeji ole na ole.
• Ofụri Esịt reversible usoro - Ee, nke ahụ dị mma! Nnọọ bụrụ na ị na-adịghị amasị ahụmahụ nke gị jailbroken iPhone na chọrọ wepụ jailbreak, ị nanị nwere jikọọ ekwentị gị na kọmputa gị na-eji weghachi ọrụ dị na iTunes iji weghachi gị iPhone ntọala tupu jailbreaking.
Cons nke jailbreaking gị iPhone
• Ị nwere ejedebe na a bricked ekwentị - 'bricking' bụ mgbe a n'ihe ize ndụ mgbe ị na-eme ụfọdụ dị oké njọ tampering na gị iPhone na ọ nwere ike na-ahapụ ngwaọrụ kpamkpam unusable. Ị nwere ike hichaa gị iPhone kpamkpam dị ọcha dị otú ahụ ikpe ma weghachi ya na-eme ọtọ ọzọ ma o sina 'bricking' bụ nnukwu hassle na ị ga-achọ izere.
• Ọ dịghị ihe ọzọ akwụkwọ ikike - jailbreaking gị iPhone ga-ndum-akwụkwọ ikike gị iPhone na ihe nke ahụ pụtara bụ na Apple agaghịzi ekpuchi ọ bụla nke na-emebi ma ọ bụ ndị ọzọ okwu na ngwaọrụ gị - nke bụ nnukwu downside na otu nke na a pụrụ ịbụ dị nnọọ oké ọnụ na n'ikpeazụ.
• More chinchi - A jailbroken iPhone na-agaghịkwa na-aga na-ukara Apple mmelite, na-eme ka ọ na ihe ewekarị chinchi na ndị ọzọ yiri mbipụta. Ị nwere ike n'ikpeazụ ejedebe chere ihu a otutu mbipụta na ọhụrụ ngwa wdg
• Reduced Nche - Nke a bụ a ọ na anya dị ka jailbreaking, ị nwere ike na-asaghe ụzọ maka hackers na-enwe ike akụ ọzọ malwares na na kwa ugboro ugboro jidesie gị iPhone.
Mgbe i kwesịrị jailbreak gị iPhone
Ya mere, olee otú na-ekpebi ma ọ bụrụ na ị dị njikere jailbreak gị iPhone na ọ bụrụ na ị ga-eme ya ma ọ bụ? Ọfọn, ma ọ bụrụ na i nwere ihe omimi oru ihe ọmụma nke ihe na-eme a jailbroken ekwentị na otú jikwaa mbipụta na ya abịa na na ị na-nwere ihe ụfọdụ na ihe mere iji nweta ngwa ọdịnala na-dịghịzi adị na iPhone, ihe atụ, ị chọrọ enwe ike iji Facetime video chat bụghị nanị WiFi kamakwa 3G, mgbe ahụ, jailbreaking bụ maka gị.
Esi jailbreak iPhone 5
Esi jailbreak iPhone 5c
> Resource> Jailbreak> iPhone jailbreak nsogbu: ka i kwesịrị ime ya ma ọ bụ?